‘क्यामेरा मेरी गर्लफ्रेन्ड’ - अचानक - नेपाल
‘क्यामेरा मेरी गर्लफ्रेन्ड’
फोटो जर्नलिस्ट क्लबको फोटो प्रतियोगितामा यसपालि हाम्रा पूर्वसहकर्मी नरेन्द्र श्रेष्ठको फोटो उत्कृष्ट भयो । क्लबको प्रतियोगितामा उनको तस्बिर दोस्रो पटक पुरस्कृत भएको हो । हाल युरोपियन प्रेस फोटो एजेन्सीमा आबद्ध श्रेष्ठसँगको कुराकानी :
फोटो खिच्न सही समय र सही ठाउँमा पुग्नु कत्तिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ ?
फोटो पत्रकारको काम नै सेकेन्ड सेकेन्डका मुभमेन्ट क्याप्चर गर्ने हो । सही ठाउँमा सही समयमा पुगिएन भने त अर्थै हुँदैन ।
त्यसका लागि के गर्ने त ?
अरुले हेर्दा ह्या ! फोटो खिचेको त हो नि जस्तो मात्र देखिन्छ । तर, त्यसमा ठूलो अध्ययन र मिहिनेत लागेको हुन्छ ।
पुरस्कृत फोटोमा चाहिँ अध्ययन छ कि मिहिनेत ?
म त्यहाँ अध्ययन गरेर पुगेको थिएँ । म नेपाल फ्लड अलर्ट एकाउन्ट भएको ट्विटर पछ्याउँछु । यसले वर्षायाममा कहाँकहाँ बाढी आउन सक्छ भनेर भविष्यवाणी गर्छ । त्यसले उक्त क्षेत्रमा सोही दिन बाढी आउन सक्ने भविष्यवाणी गरेको थियो । अछाम जाने कि सप्तरी भन्ने रोज्ने अवसर थियो मलाई । उक्त अध्ययनका कारण मैले सप्तरी छानेँ । त्यहाँ केही हुन सक्छ भन्ने अन्दाज थियो ।
सही ठाउँ र सही समयमा मिहिनेतले पुगिन्छ कि भाग्यले ?
भाग्यले एक–दुईचोटि पुग्न सकिन्छ होला । तर, मुख्य कुरा मिहिनेत र अध्ययन नै हो ।
यसअघि र यसपालि जितेको रकम फोटोका पात्रलाई दिनुभयो । अब जित्नुभयो भने पनि पात्रलाई नै दिने हो ?
दिने/नदिने अलग कुरा हो । फोटो पत्रकारितामा दुई दशक बिताएँ । द्वन्द्वका बेला लास, आँसु र रोदनका फोटो खिचेँ । यस्ता दृश्यले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा असर गरिरहेको हुन्छ । अरुले देख्दाचाहिँ तस्बिरको पात्रलाई सहयोग गरेजस्तो हुन्छ । तर, आफैँले आफैँलाई सहयोग गरेको हो मैले ।
हिमाल हाँसेको वा प्राकृतिक सुन्दरता खिचेर पाएको पुरस्कार होइन । उनीहरुको पीडा, दु:ख खिचेको हुँ । हामी त फोटो खिच्छौँ, सकियो । उनीहरुलाई सहयोग गर्ने अवसर कमै हुन्छ । त्यस्तो पैसा आफैँले राखेँ भने आफैँलाई माफ गर्न सक्दिनँ भनेर पात्रलाई नै दिएको हुँ ।
देखेर पनि फोटो खिच्न नपाएको क्षण ?
ठ्याक्कै छुटेको छैन ।
यस्तो पनि सम्भव छ ?
म क्यामेरालाई गर्लफ्रेन्डजस्तो मान्छु । कुनै मोमेन्ट नछुटोस् भनेर जहाँ जाँदा पनि सानो क्यामेरा बोक्छु । यो हाम्रो कर्तव्य हो ।
फोटो खिचेर समय बर्बाद गरेको क्षण सम्झनुहुन्छ ?
त्यस्ता घटना धेरै छन् । ठ्याक्कै सम्झिन सकिनँ । दिनभरि हिँडिन्छ । एउटै गतिलो फोटो खिच्न नसकेको कति छ कति । घन्टौँ बिताए पनि राम्रो फोटो त सेकेन्डमै खिचिने हो ।
नेपाल र विदेशमा गरिने फोटो पत्रकारितामा के भिन्नता रहेछ ?
बाहिरका मिडियामा काम गर्दा आफूलाई ज्यादै स्वतन्त्रता पाएको छु । तर, नेपालमा छैन । जहिल्यै भोलिपल्ट पत्रिका छाप्नैपर्ने, पेज भर्नैपर्ने दबाब हुन्छ । ‘कम्प्रोमाइजिङ’ तस्बिर खिच्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी मिडियामा महिनामा दुइटा फोटो खिचे पनि हुन्छ । सिर्जनशील बन्ने, सोच्ने फुर्सद हुन्छ ।